AKA ATỌỌLA NDI JI OTU AFỌ FEE ALA NNA HA MMANỤ AÑỤ MMANỤ AÑỤ NA STEETI IMO – hoo!haa!!
Aka na-achị steeti Imo bụ Owelle Rochas Okorọcha enyela ikikere ka-enye ka ha ra bụ ndị jiri otu afọ fee ala nna ha na steeti Imo na afọa puku naira iri n’otu n’otu. Ndi nwere isi ọmaa dị otu puku mmadụ, na naari mmadụ ise na mmadụ iri anọ na abụọ n’ọnụ ọgụgụ.
Ọbụ na Tọsụdee abalị iri na abụọ nke onwa anọ n’afọa ka onye ọchịchị Rochas nọrọ kwue nkea. Ọ sị na nkea bụ iji nyere ndia jiri otu afọ fee ala nna ha aka ịgbara ụgbọ lawa steeti ha dị iche iche. N’iga n’ihu, Okorọcha sịrị na onye mekarịchara nke ọma mgbe ha na-efe ala nna ha na steeti Imo bụ nwada Umetawara Lorita Ebere ka aga-enye naari puku naira abụọ. Ọ sịkwara na-aga enye nwadaa ọrụ n’ụlọ ọrụ ọbụla dị ya mma na steeti Imo ma ọ chọọ irụ ọrụ ebe ahụ.
N’ama ezum ezu Heroes Square, Owerri ka onye ọchịchị Rochas nọrọ kele ndia jiri otu afọ fee ala nna ha mgbe ha kwụrụ n’ọgbara n’ọgbara nke iji pịachị ofufe ha fere ala nna ha.
Ọkorọcha sịrị na ya ji ohere ahụ ekele ha, ọbụghị nanị maka na ha abụrụla ndi nwere nzere mmụta, kama na-agụnyela ha na ndi fere ala nna ha nke ọma.
O nyere ha ndụm ọdụ ka ha gbaa mbọ jiri aka ha keputara onwe ha ọrụ ma ghara ịkpụrụ asabodo ha na-agagharị n’ụdị ịchọ ọrụ.
N’okwu nke ya, onye ntụzi-aka ndi ji otu afọ efe ala nna ha na steeti Imo bụ Oriakụ Bakare Josephine Uche toro onyinye a Okorọcha nyere ma tokwa ya maka agụm akwụkwụ n’efu na steeti ahụ bụ nke ọ sịri na o meele usoro agụm akwụkwọ n’Imo sụrụ gedee ma bụrụkwa nke na-agụ agụụ nñomi. Oriakụ Uche toro onye ọchịchịa nakwa gọmenti etiti maka iwechighata iji ịkwụ n’ọgbara n’ọgbara wee pịachi ofufe ala nna bụ nke akwụsịrị afọ ole na ole gara aga.
N’okwu nke ya, ode akwụkwọ ngbasa akụkọ aka na-achị steeti Imo bụ Sam Ọnwụemeọdọ gwara ndia jiri otu afọ fee ala nna ha na ihe ha mere gosiri na agụnyela ha na ndi ezigbo ụmụafọ ala anyị. Ọ sịrị na ihe bụ isi ahụrụ kwaba okpu nke ofufe ala nna a bụ iji jikere ndi gụchara akwụkwọ irụrụ ala anyị ọrụ n’ebe ọbụla akpọrọ ha ime nkea. Ọ sịrị na ya nwere obi añụrị na ndia fere ala nna ha nke ọma na steeti Imo. Ọ dụkwara ha ọdụ ka ha gharakwa itinye uche ha niile n’inweta nanị ọrụ oyibo kama ka ha were mmụta ha dị iche iche keputara onwe ha ọrụ.
Previous Post: ỌHỊA
Next Post: IHE MBEREDE OKPORO ỤZỌ!